ဒလရေသန့် စက်ရုံကိစ္စ တိုင်းလွှတ်တော် အမတ်ကို သူခိုးဟု လူမှုကွန်ရက်ပေါ် ရေးသားသူအား အမှုဖွင့်ထာ?? - Yangon Media Group
ဒလရေသန့် စက်ရုံကိစ္စ တိုင်းလွှတ်တော် အမတ်ကို သူခိုးဟု လူမှုကွန်ရက်ပေါ် ရေးသားသူအား အမှုဖွင့်ထာ??
ဒလတွင် ရေသန့်စက်ရုံ တည်ထောင်မှုအ ပေါ် တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကို သူခိုးဟု လူမှုကွန်ရက်၌ Comment ရေးသူအား ၆၆ (ဃ) ဖြင့် အမှုဖွင့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒလမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်း ရင်သည် ဒလမြို့နယ်တွင် ရေချို ရေသန့် သောက်ရေရရှိရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် AG ရေသန့် ကုမ္ပဏီတုိ့ပူးပေါင်း၍ ရေသန့် စက်ရုံတည်ထောင်မှုအပေါ် လူမှု ကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ်၌ Zaw Gyi အကောင့်ပိုင်ရှင်က ရေသန့် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်သင့်ကြောင်း ဧပြီ ၁၉ ရက်က Post တင်ခဲ့ရာ၌ Thein Soe အကောင့်ပိုင်ရှင်က ”သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ဘယ်လုပ် ရဲမလဲဗျာ၊ လွှတ်တော်အမတ်နဲ့ AG နဲ့ပေါင်းပြီး ခိုးစားထားတာ နည်းမှမနည်းတာ၊ အဲဒီ ရေသန့်စက် ဘယ်ဝင်ငွေနဲ့လုပ်သလဲ၊ သတ္တိရှိ ရင် တစ်ပတ်အတွင်း သတင်းရှင်းလင်းပွဲလုပ်ကြည့်ပေါ့။ ရေသန့်စက် ဗန်းပြပြီး အိတ်ထဲကောက်ထည့် သွားတာမသိတဲ့သူတွေဘဲ ဂျင်းထည့် လို့ရမယ်”ဟု Comment ရေးသား ခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ထိုသို့ Comment ရေးသား မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းရင်က ၎င်း၏ဂုဏ်သိက္ခာအား ထိခိုက်စေသည့်အပြင် လွှတ်တော်၏သိက္ခာကိုပါ ထိခိုက်စေသဖြင့် Thein Soe အကောင့်ပိုင်ရှင်အား ဖော် ထုတ် အရေးယူပေးရန် ဒလမြို့မ ရဲစခန်းသို့ ဧပြီ ၂၈ ရက်က တိုင် တန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒလမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းရင်က ”ဧပြီ ၁၉ ရက်နေ့က Zaw Gyi အကောင့်က ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ် တက်လာတယ်။ Zaw Gyi ကတော့ ရင်းနှီးတယ်။ ဒလရေသန့်ကိစ္စကို သတင်းရှင်းလင်းပွဲ ဘာကြောင့်မ လုပ်တာလဲ။ မတ် ၁၅ ရက်နေ့က ဝန်ကြီးချုပ်လာတုန်းက သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ဖို့အတွက် ပြော သွားတယ်။ ဘာကြောင့်မလုပ်တာ လဲဆိုပြီး ရေးလိုက်တယ်။ ရေးတဲ့ အပေါ်မှာ Thein Soe ဆိုတဲ့ အ ကောင့်က သူ့အကောင့်ထဲမှာ ဝင် ရေးတယ်။ အဲဒီမှာစကားလုံးအသုံး အနှုန်းတွေက ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိ ခိုက်တဲ့အတွက် အဲဒီအကောင့်ပိုင် ရှင်က ဘယ်သူလဲဆိုတာ စုံစမ်းတယ်။ စုံစမ်းတာမရသလို အကောင့်ကို လည်း ဖျက်လိုက်တယ်။ လိုက်ရှာ တော့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီက ဖုန်းနံပါတ်ရတယ်။ သူဖုန်းဆက် တော့လည်း ဖုန်းမကိုင်ဘူး။ ဖုန်းနံ ပါတ်ရယ် သူ့ရေးထားတာကိုပရင့် ထုတ်လိုက်တယ်။ ပရင့်ထုတ်ပြီးတော့ အဲဒီစာရွက်တွေနဲ့ ဒလရဲစခန်းမှာ အမှုသွားဖွင့်လိုက်တယ်”ဟု ဧပြီ ၃ဝ ရက်က ပြောသည်။
Thein Soe အကောင့်ပိုင် ရှင်၏ ဖုန်းနံပါတ်မှာ ဝ၉-၇၈၂၁——- ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းချက် အရသိရကြောင်း ၎င်းကဆက် လက်ပြောသည်။ ဒလမြို့မရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိ တစ်ဦးက ” Thein Soe အကောင့် ပိုင်ရှင်ကိုတော့ လတ်တလောက စုံစမ်းနေတုန်းပါ။ ဖမ်းမမိသေးပါ ဘူး။ အကောင့်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ကတော့ တရားလိုပဲသိပါလိမ့်မယ်။ သူ့ထွက်ဆိုချက်နဲ့ တိုင်တန်းတာဆို တော့ လက်ခံထားတာပဲရှိတယ်”ဟု ဧပြီ ၃ဝ ရက်က ပြောသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒလ မြို့မရဲစခန်းမှ (ပ)၃၉၉/ ၂ဝ၁၈၊ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ-၆၆ (ဃ) ဖြင့် Thein Soe အကောင့် ပိုင်ရှင်ကို အမှုဖွင့်ထားသည်။
FDA ဒုကြီးကြပ်ရေးမှူး အဓမ္မကျင့် အသတ်ခံရမှု စွပ်စွဲခံတက္ကစီ ယာဉ်မောင်းကို သေဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည့်
ခရီးသည်တင်ယာဉ် ဘရိတ်ပေါက်ပြီး အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ လမ်းလယ်ရှိ ဘာရီယာတုံးများ ဝင်တိုက်၊ တစ?